I-Foreword Foreword - I-Foundation Foundation
Ndabona ukuba ndisemzimbeni apho andingakwazi ukuzikhulula. Ndilahlekile, ndedwa, kwaye ndibuhlungu buhlungu. Iziganeko eziphindaphindiweyo namava ndiqinisekisile ukuba izinto azizange zibonwe; ukuba kukho utshintsho oluqhubekayo; ukuba ayikho isigxina nantoni na; ukuba abantu babesoloko bethetha okuchasene noko bathetha ngokwenene. Abantwana badlala imidlalo abayibita ngokuthi "bakholelwa" okanye "masenze ngathi." Abantwana badlala, amadoda namabhinqa ayenokwenza ukukholelwa nokuzenzela; abantu abambalwa babenenyaniso kwaye banyanisekileyo. Kwakukho inkunkuma kumzamo wabantu, kwaye ukubonakala akuzange kugcine. Izibonakaliso azizange zenziwe ukuba zigcine. Ndazibuza: Izinto kufuneka zenziwe njani eziza kuhlala, kwaye zenziwe ngaphandle kwemfucuza kunye nengxaki? Enye inxalenye yam ndiphendule: Okokuqala, yazi into oyifunayo; ubone kwaye uhlale ukhumbula ingqalelo indlela oya kuba nayo into oyifunayo. Emva koko cinga kwaye uthanda kwaye uthethe ukuba kubonakala, kwaye oko ucinga ukuba iya kubuthwa kwi-atmosphere engabonakaliyo kwaye igxininiswe kwaye ijikeleze loo fomu. Andizange ndicinge ngala mazwi, kodwa la mazwi achaza oko ndandicinga. Ndithembele ukuba ndiyakwenza oko, kwaye ndazama ndazama ndazama ixesha elide. Ndahluleka. Xa ndihluleka ndaziva ndihlazekile, ndahlazeka, kwaye ndibe neentloni.
Kunyaka odlulileyo ndathenge ivolumu equlethe iincwadi ezilahlekileyo zeBhayibhile kunye neencwadi ezikhohliweyo zase-Eden. Xa sitshekisha iphepha lale ncwadi, kuyamangalisa ukubona ukuba zininzi izibhalo ezingaqhelekanga kunye nezinye ezingenakuqondakala xa ziqonda xa kubhalwe into ebhaliweyo malunga neZiqendu zeZiqu kunye nezigaba zayo ezintathu; malunga nokuhlaziywa komzimba womzimba kumzimba ongenamfi, ongafiyo kunye nommandla woBugxininiso, obhalwe ngamazwi kaYesu ngu "uBukumkani bukaThixo."